Ingghọta Mkpa Ndị Ahịa Gị na Nkọwa Ebumnuche | Martech Zone
Maka ọtụtụ ndị ọkachamara n'ahịa na ịre ahịa, ọ na-abụ ọgụ na mgba mgbe niile iji nweta nghọta ọ bụla sitere na data dị ugbu a. Ọnụ ọgụgụ na-awụ akpata oyi nke data na-abata nwere ike ịbụ ihe na-emenye ụjọ ma dị oke egwu, ma na-anwa iwepụ ounce ikpeazụ nke uru ahụ, ma ọ bụ naanị nghọta dị omimi, site na data ahụ nwere ike ịbụ ọrụ na-emenye ụjọ.
N'oge gara aga, nhọrọ dị ole na ole:
Iku ndị ọkà mmụta sayensị. Approachzọ ịnweta ndị nyocha data ọkachamara iji nyochaa data ma jiri azịza lọta nwere ike ịdị oke ọnụ ma na-ewe oge, na-ata nri izu ma ọ bụ ọnwa, ma mgbe ụfọdụ ọ na-alaghachi naanị nsonaazụ enyo.
Tụkwasị obi gị. Akụkọ ihe mere eme egosila na nrụpụta nke nsonaazụ ndị ahụ nwere ike bụrụ ihe na-enyo enyo.
Chere ma lee ihe n’eme. Usoro mmeghachi omume a nwere ike ịhapụ nzukọ na miasma nke ịsọ mpi na ndị ọzọ niile ejirila otu ụzọ.
Nchịkọta amụma agbawaala mkpokọta nsụhọ nke enterprise ahịa na ahịa ọkachamara, na-enyere ha aka ịzụlite na ezi na-akụ na-edu ndú ụdị nke na-ebuli mkpọsa arụmọrụ.
Amụma nchịkọta teknụzụ agbanweela ụzọ ụlọ ọrụ si aghọta, nyochaa ma soro ndị ahịa ha ugbu a na ndị nwere ike iji AI na mmụta igwe rụọ ọrụ, ọ na-enwekwa mgbanwe dị ukwuu na etu ndị ọkachamara n'ahịa na azụmaahịa si enyocha ma wepụ uru site na data ha. Nke a emeela ka a gụkwuo ya nchịkọta mmepe na nhazi na ntinye nke ngwa ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-agbakwunyekwu data gbasara ndị ahịa ụlọ ọrụ na mkpa ha.
Amụma nchịkọta na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ịkụnye ihe igwe na AI, iji gbakọta ngwa ngwa amụma ndị a haziri ahazi. Modelsdị ndị a na-eme ka nsonaazụ ndu, ọgbọ ọhụụ na ndu ndu dị elu site na iji ndị ahịa dị na nzukọ na data atụmanya na ịkọwa etu ndị ahụ ga - eduga ma ọ bụ ndị ahịa ga - esi tinye - ihe niile tupu ọrụ na azụmaahịa amalite.
Nkà na ụzụ ọhụrụ, agbakwunyere na ngwọta dịka Microsoft Dynamics 365 na Forzụ ahịa CRM, na-anapụta ikike iji gosipụta omume ndị ahịa na oge awa site na usoro omume enyi na-arụ ọrụ na-akpaghị aka na anaghị achọ ndị ọkà mmụta sayensị data. Ọ na - enyere nnwale dị mfe nke nsonaazụ dị iche iche na ihe ịga nke ọma banyere ndị na - eduga ga - azụta ngwaahịa nke ụlọ ọrụ, denye aha na akwụkwọ akụkọ ụlọ ọrụ, ma ọ bụ gbanwee ndị ahịa n'ụzọ ndị ọzọ, yana nke na - eduga ga - agaghị azụta, n'agbanyeghị olee ihe nkwekọrịta ahụ na-atọ ụtọ.
Ihe omuma omuma a di omimi na enye ndi oru ahia aka ime ka ihe ndi n'azu ahia di nma site na iji ike nke igwe eji eme ihe omuma, na njirimara data nke ahia na nke ndi ahia iji nweta ihe nlere di egwu, nke nwere uche, na nke ichoro. Ọnụ ọgụgụ ntụgharị nwere ike ịbawanye site na 250-350 pasent, na usoro otu nkeji jiri ihe ruru 50 pasent.
Amụma, proactive ahịa na-enyere azụmahịa ọ bụghị naanị inweta Ọzọ ndị ahịa ma mma ahịa.
Nchọpụta miri emi a na-eduga n'ịghọtakwu azụmaahịa ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu ịzụrụ ma ọ bụ itinye aka, yana inye ndị na-azụ ahịa ohere ịnweta ọgụgụ isi nwere ike ịkọwa amụma n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na ndị otu na - azụ ahịa na azụmaahịa nwere ike nweta nghọta banyere omume ndị ahịa ha ugbu a na nke ga - eme n'ọdịnihu, ha nwere ike gosipụta ọrụ na ngwaahịa ndị ga - amasị ha. Nke ahụ pụtara ịre ahịa na ịre ahịa dị irè karị, yana n'ikpeazụ ọtụtụ ndị ahịa. Chris Matty, onye isi na onye guzobere Versium
Amụma nchịkọta na-enyere ndị ahịa na ndị ahịa aka ịghọta ihe bara uru site na ndị ahịa akụkọ ihe mere eme na data CRM iji chepụta ụdị amụma.
Na omenala, Njikọ Mmekọrịta Ndị Ahịa (CRM) abụrụla ihe na-agafe agafe, reactive arụ ọrụ. N'ebe ndị ọzọ nọ na-emefu ego na oge ma na ndị sayensị data ma ọ bụ na hunch, ịbụ mmeghachi omume bụ obere ụzọ dị ize ndụ. Amụma nchịkọta na-anwa igbanwe ire ahia na ire ahia CRM site na ibelata ihe egwu na ikwe ka otu ndi oru ahia na-agba oso ahia na ahia ahia.
Ọzọkwa, ịkọ nchịkọta na-enyere ọgbọ nke ịkọ ụzọ akara maka ma B2C na B2B ahịa atụmanya nke na-enyere ahịa na ahịa otu na-laser lekwasịrị anya nri ndị ahịa na oge kwesịrị ekwesị, na-eduzi ha na ngwaahịa na ọrụ kwesịrị ekwesị. Kindsdị ndị a nchịkọta nye ndi oru ohere iweputa ma meputa ihe ohuru, ntughari olile anya di elu nke dabere na ntaneti ndi ahia nke ugbua site na iji ihe omuma data ma obu ulo oru data.
Fọdụ n'ime ihe eji eme ihe banyere nnukwu data nchịkọta gbadoro anya n'ịza ajụjụ a, Kedu ihe onye ahịa na-azụkarị? Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, nke a bụ nke ọma na BI na nchịkọta ngwaọrụ, site na ndị ọkà mmụta sayensị data na-emepe emepe algọridim na usoro data dị n'ime, na nso nso a, site na igwe ojii ahịa nke ndị na-eweta dị ka Adobe, IBM, Oracle, na Salesforce nyere. N'ime afọ gara aga, onye ọkpụkpọ ọhụụ apụtawo na ngwa ọrụ onwe onye nke, n'okpuru mkpuchi ahụ, mmụta igwe njigide, nke ejiri data nwere ihe karịrị otu puku ijeri na-akwado ya. Companylọ ọrụ ahụ [bụ] Versium. Tony Baer, ​​Onye isi nyocha na Ovum
Amụma nchịkọta n'omume ndị ahịa bụ ubi a maara nke ọma, kwuru Baer. Ka o sina dị, dabere na nghọta na data bu eze, ọ na-enye na ihe ngwọta dịka nke Versium bụ ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ n'ihi na ha na-enye ohere ịnweta nnukwu nchekwa nke ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa yana ikpo okwu na-etinye mmụta igwe iji nyere ndị na-ere ahịa aka ịkọwa omume ndị ahịa.
Versium anapụta akpaghị aka amụma nchịkọta azịza, nke na-eweta ọgụgụ isi data nwere ike ịrụ ọrụ ngwa ngwa, karịa n'ụzọ ziri ezi yana obere akụkụ ego nke ịnweta ndị otu sayensị data dị oke ọnụ ma ọ bụ ndị ọrụ ọrụ ọkachamara.
Ihe ngwọta nke Versium na-eme ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ LifeData® dị ukwuu nke ụlọ ọrụ ahụ nwee, nke nwere ihe karịrị 1 puku ijeri ndị ahịa na njirimara data azụmaahịa. LifeData® nwere ma data omume ntanetị na ntanetị na ntanetị gụnyere nkọwa gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ezigbo data dabere na mmemme, mmasị ịzụta, ozi gbasara ego, mmemme na nka, omume igwe na ndị ọzọ. Àgwà ndị a kwekọrọ na data dị n'ime ụlọ ọrụ, ma jiri ya na ụdị mmụta nke igwe iji melite nnweta ndị ahịa, njigide na ire ahịa na ire ahịa.
Mụtakwuo Banyere amụma Versium
Tags: njikwa mmekọrịta ndị ahịamicrosoft na-agbanwe agbanwe 365akwanchịkọta amụmaere ahịa crmNkechi